राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रहेसम्म जबजको च्याप्टर क्लोज हुदैन : निर्मल भट्टराई (अन्तर्वार्ता)::त्रिशुलीखवर
जबजको त च्याप्टर क्लोज भएको होइन ? तपाईको पार्टीको उपमहासचिव घनश्याम भुसालले त्यही भन्नुभएको छ …
अँ उहाँले अहिले किन त्यसो भनिरहनु भएको छ, बुझ्न सकिएको छैन । केही समय अगाडि उहाँको “कम्युनिष्ट आन्दोलन : अबको बाटो” शीर्षकको कार्यपत्रमा लेख्नुभएका हरफमा त जबजको कार्यदिशालाई समाजवादमा पुग्ने कार्यदिशाको रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ —“पार्टीको नवौं महाधिवेशनले पार्टीको आगामी मूल कार्यदिशा “राष्टिय पूँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने” भनेर प्रष्ट पारेको छ ।
उहाँको एक बर्ष अघिको यो कुरालाई मान्ने हो भने जबजको च्याप्टर क्लोज होइन, झन सार्थकता बढेको देखिन्छ । पार्टी एकता हुनै लाग्दा अहिले उहाँ १८० डिग्री किन घुम्नुभयो, यो आस्चर्यजनक मात्र छैन, सन्देहात्मक पनि छ । अहिले उहाँ भन्नुहुन्छ—“१० कक्षा पास गरेको विद्यार्थी अव ११ मा जानुपर्छ, अलग्गै कोर्स पढनु पर्छ । मास्टर अलग्गै हुन्छ । हामी पनि त्यसरी नै अगाडी जानुपर्छ । अव म १० कक्षामा पढेका प्रिय किताव हरु लिएर ११ मा पढन जान्छु भनेर हुदैन । त्यसरी गयो भने के हुन्छ रु अहिले जवजको पनि अवस्था त्यही नै हो । केही समय अघिसम्म जबजलाई “दशकौंसम्म हिड्ने बाटो” को रुपमा व्याख्या गर्ने घनश्याम भुसाल कसरी एकाएक “दश कक्षाको कोर्स”संग तुलना गर्न पुग्नु भो ?
एकता पछि बन्ने पार्टीमा अहिले एमालेले अवलम्बन गरेको वा त्योभन्दा उन्नत विधि अवलम्बन गरेर पार्टीको आन्तरिक जीवन व्यवस्थित हुनेछ । पार्टी जीवनमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अवलम्बन गर्दा नीति र नेतृत्व निर्माण पार्टीका आम सदश्यको सार्वभौमिक अधिकार भएकोले सदस्य कार्यकर्ता मैत्री नेता नै एकता पछि बन्ने पार्टीको नेता हुने हो । विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीमा देखा गूटबन्दीका समस्या विधिबाट हल नहुँदा त्यसले विभाजन निम्त्यायो तर एमालेको अनुभवले देखाएको छ, पार्टी जीवनमा अपनाइएको लोकतान्त्रिक विधिले यसलाई झन मजबुत बनाएको छ । एकता पछि बन्ने पार्टीले यस्ता समृद्ध अनुभव अवस्यमेव ग्रहण गर्नेछ । जबज बारे घनश्याम भुषालले यसो भनेका छन् हेर्नुहोस :